Madda Walaabuu Press: Adda Bilisummaa Oromoo (ABO): Waamicha Qabsoo
Har’a yeroo ummatni Oromoo ka’ee karaa nagaa mirga isaa falmachaa jiru, moggaa dhaabbatanii qe’ee koo hin geenye jedhani daawwatuun hin tahu. Kan har’a ummata Oromoo irra gahaa jiru bor waan qe’ee keessanitti dhufuuf cal jettanii ilaaluun gaabbii taha. Yeroon kun cunqursaa mootummaan Wayyaanee ummatoota biyya Itophiyaa keessaa jiran irraan gahaa jiru callifnee itti ilaallu miti. Sirnooti Itophiyaa bulchaa turanii fi jiran wal shakkii fi bir’aa ummatoota gidduutti bu’ureessanii jiru.
Amma kan ummatoota Itophiyaa irraa barbaadamu bakka jiran hundatti ka’anii mootummaa Wayyaanee/ Ihadeeg of irraa dabruu dha. Kanaaf yaa Ummatoota Itophiyaa!